တရုတ် Android - Androidsis | Androidsis (စာမျက်နှာ ၂)
Cubot P40 သည် Budget King quad ကင်မရာကိုထည့်သွင်းရန်အာရှထုတ်လုပ်သူမှလာမည့်ဖုန်းဖြစ်သည်။ ၁၀ ရက်ပဲရောက်မယ်
Cubot သည်၎င်း၏နောက်ထပ်ဖုန်း၏ပထမ ဦး ဆုံးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ Cubot 20. ဇွန်လ ၁ ရက်တွင်ရရှိနိုင်သော 4G စက်ပစ္စည်း။
Tecno Mobile သည် Spark လိုင်းတွင် Tecno Spark5တွင်ထုတ်ကုန်အသစ်တစ်ခုကိုကြေငြာခဲ့သည်။ နောက်ဘက်အာရုံခံကိရိယာလေးခုအထိပါ ၀ င်သည့်နိမ့်ကျသည့်ကိရိယာတစ်ခု။
Oppo A92 သည်အလယ်အလတ်တန်းစားစမတ်ဖုန်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး Snapdragon 665 နှင့် ColorOS 7.1 ပါဝင်သည်
Oppo A92 အသစ်ကိုတရားဝင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးမကြာမီမှာမလေးရှားမှာစတင်မိတ်ဆက်တော့မှာပါ။
Realme X50m 5G: X50 မိသားစု၏အသစ်သောဘတ်ဂျက်ပုံစံ
Realme မှ 5G ထုတ်ကုန်သစ်ကိုယခုအပတ်တွင်ဖြန့်ချိမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည် ၎င်းသည် Realme X50m ဖြစ်သည်၊ စဉ်းစားရန်အလယ်အလတ်တန်းစားကိရိယာ
Oppo A72: ၆.၅ လက်မမျက်နှာပြင်၊ Snapdragon 6,5 နှင့် ColorOS 665 ပါသောကိရိယာအသစ်
Oppo A72 သည်တရုတ်ကုမ္ပဏီမှစတင်အဆင့်မြင့်ကိရိယာဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုဂျာမနီတွင်ကြေညာခဲ့ပြီးဥရောပတွင်အစ ဦး ၌ဖြန့်ချိမည်။
Oppo A52 သည် Snapdragon 665 နှင့် ColorOS7၏တရားဝင်ဖြစ်သည်
Oppo သည် A52 သစ်၏အလယ်အလတ်တန်းစားစွမ်းဆောင်ချက်ကိုတရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်။
Oppo Find X2 Neo ကိုဥရောပစတိုးတွင် 12 GB RAM နှင့် Snapdragon 765G ပါရှိသည်
Find X2 လိုင်းသည်အစိတ်အပိုင်းသစ်တစ်ခုဖြစ်သော Find X2 Neo ကိုစတင်ခြင်းဖြင့်ချဲ့ထွင်လိမ့်မည်။ ဥရောပစတိုးဆိုင်တစ်ခုတွင်ပေါ်လာသည့်စက်ပစ္စည်း။
Oppo A92S သည်ယခုအခါတရားဝင်ပေါ်ထွက်လာပြီး၎င်း၏ panel ပေါ်ရှိသတင်းများ၊ အရောင်များနှင့်ကိရိယာ၏ရုပ်ပုံများအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။
မတ်လ ၂၁ ရက်တွင် Nubia သည် 21G စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောအလယ်အလတ်တန်းစား Nubia Play ဟုခေါ်သည့်ဖုန်းအသစ်ကိုကြေငြာမည်။
HiSense သည်၎င်း၏ပထမဆုံး 5G ဖုန်း F50 ကိုတနင်္လာနေ့တွင်တင်ဆက်မည်ဖြစ်ပြီး၎င်းစက်သည် Unisoc မှထုတ်လုပ်သည့်ချစ်ပ်တစ်ခုနှင့်ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
တရားဝင်၊ ကြေညာခြင်းမပြုမီ Oppo A12 သည်အရေးကြီးသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ မျက်နှာပြင်၊ ဘက်ထရီနှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုပြသခဲ့သည်။
Vivo Y50 က ၆.၅၃″ panel ရှိသော quad camera ပါဝင်သည့်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်သည်
Vivo Cambodia သည်အာရှဈေးကွက်အတွက် Vivo Y50 ဖုန်းကိုအစတွင်အတည်ပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာအလယ်အလတ်တန်းစားဘက်ထရီကောင်းတယ်။
Oppo Find X2 Lite သည်၎င်း၏ပုံရိပ်နှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြသည်
Find X2 မိသားစုဝင်အသစ်ဖြစ်သော Oppo Find X2 Lite ၏ပုံရိပ်နှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
Infinix သည် Android7နှင့်အတူ Note7နှင့် Note 10 Lite ဖုန်းအသစ်များကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်
ဟောင်ကောင်ထုတ်လုပ်သူ Infinix သည်စမတ်ဖုန်းသစ်နှစ်မျိုးဖြစ်သော Note7နှင့် Note7Lite ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်မကြာမီရောက်ရှိတော့မည့်အလယ်အလတ်တန်းစားဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုဖြစ်သည်။
ကြမ်းတမ်းသော Cubot King Kong CS စမတ်ဖုန်းကိုဝယ်ယူရန်အကြောင်းရင်း ၅ ချက်
သင်ကသင့်တော်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့စမတ်ဖုန်းကိုရှာနေတယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာ ၁၀၀ အောက်ရှိတဲ့စမတ်ဖုန်းဖြစ်တဲ့ Cubot King Kong CS ကိုကြည့်သင့်တယ်။
Vivo S6 5G သည် Exynos 980 နှင့် ၆.၄၄ လက်မမျက်နှာပြင်ဖြစ်သည်
Vivo S6 5G သည်အာရှဈေးကွက်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခြင်းမပြုမီပေါက်ကြားမှုများစွာပြီးနောက်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ ဒီဖုန်းအသစ်နဲ့ပါတ်သက်တဲ့အချက်အလက်အားလုံးကိုသိထားပါ။
Oppo Reno Ace2သည်၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များအားလုံးကို TENAA တွင်ဖော်ပြသည်
Oppo Reno Ace2သည် Find X2 အထင်ကရကုမ္ပဏီနှစ်ခုရောက်ရှိပြီးသည့်နောက်တွင်စတင်မိတ်ဆက်မည့်ကုမ္ပဏီမှလာမည့်ဖုန်းဖြစ်သည်။
Vivo S6 5G သည်၎င်း၏ဒီဇိုင်းကိုပြသပြီးအဓိက 48 MP sensor ကိုပြသသည်
Vivo သည် S6 5G ၏ပထမဆုံးပုံရိပ်များကိုပြသခဲ့သည်။ ၎င်းမှာအဓိကအာရုံခံကိရိယာကြီးတစ်ခုရှိပြီး၎င်းသည်တစ်ပတ်ကျော်အတွင်းရောက်ရှိလာလိမ့်မည်။
Vivo S6 ကို 5G စနစ်ဖြင့်အစားထိုးခဲ့ပြီး 5G modem ဖြင့်အစားထိုးခဲ့ပြီးပဉ္စမမျိုးဆက်နှင့်အခြားအရာများအကြားတော်လှန်ရေးဖြစ်လာလိမ့်မည်။
Blackview သည်၎င်း၏ ၇ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်လက်ဆောင်များဖြင့်ကျင်းပခဲ့သည်
အကြမ်းခံသောစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူ Blackview ၏ ၇ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ကိုကျင်းပရန်ကုမ္ပဏီသည်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အထူးလျှော့စျေးနှင့်အခမဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနေသည်
Infinix S5 Pro သည် pop-up selfie ကင်မရာနှင့် XOS 6.0 ဖြင့်တရားဝင်ဖြစ်သည်
Infinix S5 Pro အသစ်သည်ယခုအခါတရားဝင်ပေါ်ထွက်လာသည့် selfie ကင်မရာနှင့်စျေးနှုန်းနိမ့်သော်လည်းအမှန်တကယ်အရေးကြီးသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်တရားဝင်ဖြစ်သည်။
Vivo သည် NEX 3s 5G ဟုလူသိများသောဗီဒီယိုနောက်တွဲယာဉ်နှင့်၎င်း၏နောက်လာမည့်ဖုန်း၏ပုံနှစ်ခုကိုပြသခဲ့သည်။ ဒီလ ၁၀ ရက်နေ့မှာတင်ပြမှာပါ။
TCL သည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။ ခေါက်နိုင်သောဖုန်းသဘောတရားနှစ်ခုကိုကြေငြာခဲ့သည်။ တရားဝင်မဖြန့်ချိမီနှစ် ဦး စလုံးသည်ရင့်ကျက်သောအဆင့်တွင်ရှိသည်။
Oppo ၏ Find X2 Pro ၏စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်ကိုမတ်လ ၆ ရက်နေ့တွင်ကြေငြာလိမ့်မည်။
ပရိုမိုဓာတ်ပုံများသည် Oppo ၏ Find X2 Pro periscope ကင်မရာ၊ Oppo Find X2 နှင့်အတူလာမည့်ဖုန်းကိုပြသသည်။
Find X2 ကိုမတ်လ ၆ ရက်နေ့တွင်တင်ပြမည့် Oppo ပြုလုပ်ရန်စီစဉ်နေသည့်ဖြစ်ရပ်၏ပိုစတာတစ်ခုထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ဒါဟာအခြားထုတ်ကုန်နှင့်တွဲဖက်။ ပြုလိမ့်မည်။
iQOO မှတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သော 3G အသစ်ဖြစ်သော Qualcomm ၏စွမ်းအားပြည့်ပရိုဆက်ဆာနှင့်ရရှိနိုင်သည့်အမျိုးအစားသုံးမျိုးပါရှိသည်။
Meizu 17 ကိုAprilပြီလမှစတင်ပြီးအာရှဈေးကွက်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ရန်အရေးကြီးသည့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုမတိုင်မီအသေးစိတ်အချက်အလက်အသစ်တစ်ခုကိုလူသိများသည်။
Infinix S5 Pro ဟာပေါက်ကြားခဲ့ပြီး pop-up selfie ကင်မရာနဲ့ကျောဘက်မှာ sensor သုံးခုအထိပြသထားပါတယ်။
Oppo က ColorOS7Update Sheet ကိုကြေငြာခဲ့သည်
Color OS7ကိုလာမည့်လများ၊ မတ်လ ၁၀ ရက်တွင်အချို့ဖုန်းများနှင့်မတ်လ ၂၀ ရက်တွင်ပုံမှန်အတိုင်း terminal သုံးခုဖြင့်စတင်မည်။
iQOO35G အသစ်သည်၎င်း၏ပရိုဆက်ဆာ၊ RAM နှင့် UFS 3.1 သိုလှောင်မှုများကြောင့်စျေးကွက်အတွင်းအမြန်ဆုံးဖုန်းများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Oppo A31 သည် ၆.၅ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့် ColorOS 6,5 ဖြစ်သည်
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားလုံးပေါက်ကြားပြီးတဲ့နောက် Oppo ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင်ရရှိနိုင်သည့် Oppo A31 အသစ်ဖုန်းကိုကြေငြာချင်ခဲ့သည်။
Oppo A31 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးနီးပါးကိုစစ်ထုတ်ထားသည်
မကြာခင်မှာ Geekbench နဲ့ Bluetooth အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရထားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တဲ့ Oppo A31 ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးနီးပါးကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။
Oppo သည် Find X2 မျက်နှာပြင်ရှိသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုအတည်ပြုပေးခဲ့သည်
Oppo ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဘာစီလိုနာတွင်ကျင်းပမည့် MWC2ပွဲတွင်ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်တွင်ပြသမည့် Find X22 အသစ်၏ panel ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။
Vivo V19 Pro ကိုမတ်လအစောပိုင်းတွင်ကြေညာမည်
မတ်လအစောပိုင်းတွင် Vivo ကုမ္ပဏီသည် V17 Pro ဟုလူသိများသည့် Vivo V19 Pro ကိုအစားထိုးမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ၎င်းသည်စွမ်းအားကောင်းသော Qualcomm ပရိုဆက်ဆာကိုတပ်ဆင်မည်။
Oppo ကပိုမိုကောင်းမွန်သည့် CPU နှင့်ကင်မရာနိမ့်သော Reno3Vitality ကိုကြေငြာခဲ့သည်
Oppo သည် Reno3အမျိုးအစား Reno3Vitality ဟုခေါ်သည့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုစတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး၎င်းသည်ပထမ ဦး ဆုံးတိုးတက်မှုအချို့ရှိခဲ့သည်။
Vivo Y91C, တရုတ်ကုမ္ပဏီ၏အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်
Vivo သည် Y91C ဖုန်းအသစ်ကိုယခုဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတွင်ရရှိနိုင်ကြောင်းကြေငြာခဲ့ပြီး Y91i မော်ဒယ်ကိုမူကွဲအဖြစ်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
Oppo က Find X2 ၏နောက်ထပ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ဆက်မှု၏နေ့ရက်နှင့်အချိန်ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ Find X ဆက်ခံသူသည်နှစ်နှစ်နီးပါးအကြာတွင်ရောက်ရှိလာသည်။
Ulefone Armor7သည်ယူရို ၅၀၀ အောက်သက်သာသည့်ဖုန်းဖြစ်သည်
Ulefone သည် Armor7အသစ်ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးမည်သည့်အကြမ်းခံမှုစမ်းသပ်မှုကိုမဆိုယူရို ၅၀၀ အောက်သာပေးခဲ့သည်။
Flipkart ၏ Realme C3 ပင်မစာမျက်နှာသည်ဖေဖော်ဝါရီ ၆ ရက်တွင်ဖြန့်ချိမည့်ဖုန်းအသစ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
TCL Plex သည် Android 10 update ကိုစတင်ရရှိသည်
အောက်တိုဘာလတွင်စတင်ဖွင့်ပြီးနောက် TCL သည် Plex terminal ကို update လုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်။ Android 10 နှင့်တစ်တန်တိုးတက်မှုများကိုရယူပါ။
Nokia သည် MWC 2020 မတိုင်မီနွေးထွေးမှုရှိသည်
Nokia 4.3 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖင်လန်ကုမ္ပဏီမှလာမည့် ၀ င်ပေါက်အဆင့်တွင်ဖော်ပြပြီး MWC 2020 တွင်တင်ပြပါမည်။
Oppo ဖုန်းအသစ်ကို FCC မှဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးနည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပြသခဲ့သည်။
Nubia မှ Red Magic 5G အသစ်သည်စျေးကွက်တွင်အမြင့်ဆုံးမျက်နှာပြင်ပြန်လည်ပြုပြင်သည့်စမတ်ဖုန်းများဖြစ်လာလိမ့်မည်။
Oppo Find X2 တွင် 120Hz QHD + မျက်နှာပြင်ပါလိမ့်မည်
Oppo Find X2 သည် 120Hz QHD + display ပါသောလာမည့်ထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူ၏ရောက်ရှိမှုသည်ယခုနှစ်ပထမသုံးလပတ်ကိုညွှန်ပြသည်။
ထုတ်လုပ်သူ Oppo သည်မကြာမီတွင်စျေးသက်သာသောဖုန်းတစ်လုံးကိုစတင်ရောင်းချမည်။ ၎င်းသည် Bluetooth SIG အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုကျော်လွန်ပြီးပထမဆုံးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပြသခဲ့သည်။
Doogee သည် Ultra-အကြမ်းခံသည့် S95 Pro အသစ်ကိုစတင်မိတ်ဆက်ပြီးကြမ်းတမ်းသောဖုန်းများအတွက်စျေးကွက်တွင်ဆက်လက်ရှင်သန်လိုသည်။
Gionee Steel5အမှတ်တံဆိပ်၏နောက်ထပ်အလယ်အလတ်ဖုန်းဖြစ်သည်
Gionee သည် Steel5ဟုခေါ်သောဖုန်းအသစ်ဖြင့်စျေးကွက်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီး၎င်းသည်လူလတ်တန်းစားများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။
Vivo V1950A TENAA တွင် NEX35G အမျိုးအစားတစ်ခုပေါ်လာသည်
Vivo သည် 5G ဖုန်းအမြောက်အများကိုစတင်မိတ်ဆက်ရန်ကြိုးပမ်းနေသည်။ Vivo V1950A သည် FCC ကို ဆက်သွယ်၍ ဤနည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးဖြစ်သည်။
Hisense သည်အရောင် e-ink မျက်နှာပြင်ပါသောဖုန်းကိုပြသည်
Hisense သည်ယခင် monochrome တွင်ပြသခဲ့ပြီးနောက် CES 2020 တွင်အရောင် e-ink မျက်နှာပြင်ပါသောဖုန်းကိုပြသခဲ့သည်။
Realme C2s များကိုထိုင်းဈေးကွက်အတွက်ကြေငြာခဲ့သည်
Realme သည် C2 မော်ဒယ်လ်အသစ်ကို Realme C2s ဟုခေါ်သည့်ထိုင်းဈေးကွက်သို့ဖြန့်ချိလိုက်သည်။ ဖုန်းကစျေးသိပ်မကြီးပါဘူး
Oppo သည်ဘေးထွက် Pop-up ကင်မရာဖုန်းတစ်ခုကိုမူပိုင်ခွင့်ပြုသည်
Oppo သည်ဘေးထွက် pop-up ကင်မရာပါ ၀ င်သည့်ဖုန်းကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်မိုဘိုင်းပစ္စည်း၏တစ်ဖက်တွင်ပေါ်လာသည်။
Realme 5i ၏ဆိုက်ရောက်မှုကိုအတည်ပြုသည် - ဇန်နဝါရီ ၆
Realme 5i အသစ်ရောက်ရှိမည့်နေ့ကိုမည်သည့်နိုင်ငံကစတင်မည်ကိုအတည်ပြုခြင်းထက်အနည်းငယ်ပိုပြီးဖြစ်သည်။ ဒါဟာ 2020 အစောပိုင်းတွင်ရောက်ရှိ
Oppo က F15 ကိုဗီဒီယိုအသစ်တစ်ခုတွင်ပြသသည်
Oppo သည်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် F15 အမည်ဖြင့်စမတ်ဖုန်းအသစ်တစ်လုံးကိုစတင်မိတ်ဆက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကတရုတ်နိုင်ငံတွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည့် Oppo A91 ဖြစ်သည်။
Oppo Reno3သည်စံချိန် ၁.၄၆ သန်းအထိရှိခဲ့သည်
ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်တွင်ကြေငြာလိုက်သည်နှင့် Oppo ၏ Reno3လိုင်းသည်တရုတ်ကိုစိတ်ဝင်စားမှုစံချိန်တင်စေခဲ့သည်။
အိန္ဒိယသည်ဇန်နဝါရီလအစောပိုင်းတွင် Vivo S1 Pro ကိုအရောင်နှစ်မျိုးဖြင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီးအာရှအမှတ်တံဆိပ်မှမျှော်လင့်ရဆုံးစမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။
စျေးသက်သာတဲ့မိုဘိုင်းကိုသင်ရှာနေပါသလား။ Realme5Pro သည် Amazon ထက်စျေးနှုန်းချိုသာသည်
Vivo သည်စမတ်ဖုန်းအသစ် MWC 2020 တွင်ပြသမည်
Vivo သည်ဘာစီလိုနာရှိ Mobile World Congress တွင်တက်ရောက်ရန်အတည်ပြုခဲ့သည်။ သူကနိမိတ်လက္ခဏာနှင့်အတူထိုသို့နောက်ကွယ်မှ V ကိုဖေါ်ပြခြင်း။
OUKITEL C17 Pro သည်၎င်း၏သုံးဆသောကင်မရာကြောင့်အံ့အားသင့်သွားပါလိမ့်မည်
OUKITEL C17 Pro သည်အလယ်အလတ်တန်းစားဖြစ်သော Sony ကလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောကင်မရာသုံးချောင်းဖြင့်ငွေအနည်းငယ်သာရရှိနိုင်သည့်အောင်မြင်မှုများ
ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်မှ ၂၉ ရက်အထိ၊ သင်ဟာဒီကမ်းလှမ်းချက်ကိုယူပြီးနောက်ဆုံးစျေးနှုန်းနဲ့ဒေါ်လာ ၅၀ လျှော့စျေးဖြင့် Oukitel Y22 ကိုရနိုင်သည်။
ဤပုံသည် Oukitel Young Y4800 ၏ပုံရိပ်များအားကျွန်ုပ်တို့အားပုံဖော်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်
သင်သည် Oukitel Y4800 ကင်မရာများ၏အရည်အသွေးကိုသင်စစ်ဆေးလိုပါကဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့ပြသထားသောဗီဒီယိုတွင်၎င်းကိုသင်ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
Oukitel Y4800 နှင့် Xiaomi Redmi Note 7: စွမ်းဆောင်ရည်စစ်ဆေးမှု
ဇူလိုင်လအလယ်ပိုင်းတွင်စျေးကွက်သို့ဒေါ်လာ ၁၉၉ ဖြင့်ရောက်ရှိလာမည့် Oukitel Y4800 terminal တစ်ခု၏စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှုအသစ်
အကယ်၍ သင်သည် Oukitel K12 အသစ်၏အရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးလိုပါကကုမ္ပဏီအနေဖြင့်၎င်းတို့တွင်သူတို့ပြုလုပ်သောစမ်းသပ်မှုအားလုံးကိုတွေ့မြင်နိုင်သည့်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုပြသသည်။
OUKITEL K12၊ ၁၀,၀၀၀ mAh ဘက်ထရီနှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်
OUKITEL K12 အသစ်သည်ကျောဘက်သားရေနောက်ကျောနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောကြော့ကိုယ်ထည်တွင်ကြီးမားသော 10.000 mAh ဘက်ထရီကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးသည်။
Oukitel Y4800 နှင့် Redmi Note7နှိုင်းယှဉ်ချက်
အကယ်၍ သင့်တွင် Redmi Note7သို့မဟုတ် Oukitel Y4800 အတန်း ဟူ၍ ပြောစရာမလိုပါက၊ ဤစာစောင်နှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်သင်ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
Vivo Y15: ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်
အိန္ဒိယတွင်တရားဝင်တင်ဆက်ထားပြီးဖြစ်သောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှ Vivo Y15၊ အလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းအသစ်အကြောင်းအားလုံးလေ့လာပါ။
Oukitel သည်သင်လိုအပ်သောစမတ်ဖုန်းဖြစ်သည်ကိုမသေချာလျှင်ဤဆောင်းပါးတွင်သင့်ကိုသင်ပြောင်းလဲပစ်ရန်အကြောင်းပြချက် ၅ ချက်ကိုပေးသည်။
Realme3Pro: စျေးနှုန်းနှင့်စပိန်နိုင်ငံတွင်ရရှိနိုင်မှု
အာရှကုမ္ပဏီ Realme သည်စပိန်နိုင်ငံတွင်တရားဝင်ရောင်းချသောပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်သော Realme3Pro ၏စျေးနှုန်းနှင့်ရောင်းချနိုင်မှုကိုတရားဝင်ကြေငြာလိုက်သည်။
OPPO K3 သည်ယိုစိမ့်ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်
OPPO K3 ၏ဒီဇိုင်းနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများကိုစစ်ထုတ်ပြီးအာရှထုတ်လုပ်သူ၏အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်ဖြစ်သော၎င်း၏ပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်သည့်ကင်မရာကိုသတိမပြုမိရန်ရှောင်ရှားသည်။
Oukitel မှယောက်ျားများသည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးဘတ်ဂျက်အားလုံးအတွက်မတူညီသောကိရိယာများကိုစတင်သည်။ သို့သော်ပုံရသည်။
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် Oukitel K9 ကိုကြိုတင်စာရင်းသွင်းနိုင်သည်
Oukitel ၏အထင်ကရဖြစ်သည့် K9 ကိုယခုစျေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်ဒေါ်လာ ၂၄၉.၉၉ ဖြင့်ကြိုတင်ရောင်းရန်ရှိသည်။
Oukitel K12 သည် ၁၀,၀၀၀ mAh ဘက်ထရီရှိပြီးဇွန်လတွင်စျေးကွက်သို့ကျရောက်နိုင်သည်
အာရှကုမ္ပဏီ Oukitel သည် K12 ကိုဇွန်လတွင်စတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး ၁၀,၀၀၀ mAh ဘက်ထရီပါရှိသည်။
Vivo S1 Pro: ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သောကင်မရာနှင့်အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်
Vivo S1 Pro ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှအလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းဈေးကွက်တွင်ဖြန့်ချိထားပြီးဖြစ်သည်။
မေ ၁၃ ရက်တွင် Oukitel K13 ကိုကြိုတင်မှာယူထားနိုင်သည်
လာမည့်မေလ ၁၃ ရက်မှ စတင်၍ သင်သည် Oukitel K13 ကိုကြိုတင်မှာယူပြီးဒေါ်လာ ၅၀ ကိုစျေးကွက်ထဲတွင်ချွေတာနိုင်လိမ့်မည်။
Vivo Z3X: အမှတ်တံဆိပ်၏အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်
တရား ၀ င်တင်သွင်းထားပြီးဖြစ်သောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှအလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်း Vivo Z3X ၏ထုတ်လွှတ်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Meizu 16S သည်ပထမဆုံးနေ့တွင်ရောင်းလိုက်သည်
Meizu 16S ၏ပထမဆုံးသောနေ့တွင်တရုတ်နိုင်ငံ၌ရောင်းချခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်းပြည်အတွင်းရှိနာရီအနည်းငယ်အတွင်းရောင်းချခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
တရုတ်ကုမ္ပဏီမှနောက်ထပ်ဂိမ်းကစားသည့် Nubia ၏ Red Magic3သည် Geekbench မှတဆင့်အထင်ကြီးစရာကောင်းသောရလဒ်များကိုပြသသည်။ ဒါကိုလက်လွတ်မထားပါနဲ့
OPPO Reno ကိုဥရောပတွင်တင်ပြီးပါပြီ။ သူတို့ဖြန့်ချိမည့်ရက်နှင့်ရောင်းချမည့်စျေးနှုန်းကိုမူအတည်ပြုပြီးဖြစ်ပါသည်။
တရားဝင်ရုရှားမှာတင်ဆက်ထားတဲ့တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်နိမ့်ပါးတဲ့ OPPO A1K ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
OUKITEL K12: အမှတ်တံဆိပ်၏စမတ်ဖုန်းအသစ်
OUKITEL K12 ၏ပထမဆုံးသတ်မှတ်ချက်များကိုရှာဖွေကြည့်ပါ၊ ဤနွေ ဦး ရောက်ရှိလာသည့်ဘက်ထရီကြီးမားသည့်စမတ်ဖုန်းအသစ်သည်
တရားဝင်တင်ဆက်ထားပြီးဖြစ်သောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှအဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်းအသစ်ဖြစ်သော Realme C2 အကြောင်းလေ့လာပါ။
တရားဝင်တင်သွင်းထားပြီးဖြစ်သောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အလယ်အလတ်တန်းစားစမတ်ဖုန်းအသစ်ဖြစ်သော Realme3Pro ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရှာဖွေပါ။
OPPO R ဖုန်းအမျိုးအစားများကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက၎င်းသည်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူအတွက်မဟာဗျူဟာပြောင်းလဲမှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။
ASUS ROG Phone2ကိုတတိယသုံးလပတ်တွင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်
ASUS ROG Phone2ကိုလာမည့်နွေရာသီတွင်တရုတ်နိုင်ငံ၌သာရောင်းချမည်ဖြစ်သော်လည်းယခုတွင်တွေ့ရလိမ့်မည်။
Huawei က ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာပေါ်ရှိစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူများဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုအခိုင်အမာဆိုခဲ့သည်
Huawei ၏စီအီးအို၏အဆိုအရ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူ HONOR နှင့်အတူဖြစ်လာလိမ့်မည်။
OPPO သည် Reno ၏စျေးနှုန်းကို၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြသည်
OPPO Reno ၏စျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါကမကြာသေးမီကတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်တွေ့ခဲ့ရသည့်အတိုင်း
Poptel V9 - အိမ်တွင်းလုပ်ဆောင်ချက်များစွာပါသောစမတ်ဖုန်းတစ်လုံး
သင့်အိမ်အတွက်အင်္ဂါရပ်များစွာပါရှိသောဖုန်းကိုရှာနေပါက Poptel V9 သည်သင်ရှာဖွေနေသည့်စမတ်ဖုန်းဖြစ်နိုင်သည်။
Vivo S1: ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းအသစ်
တရား ၀ င်တင်ဆက်ထားပြီးမကြာခင်မှာဖြန့်ချိတော့မည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှအလယ်အလတ်တန်းစားစမတ်ဖုန်းသစ် Vivo S1 အကြောင်းလေ့လာပါ။
Meitu ၏ကြေငြာချက်နှင့် ပါတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုလျှင်ရောင်းအားညံ့ဖျင်းသောကြောင့်စမတ်ဖုန်းကိုအမြဲတမ်းထုတ်လုပ်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်းအတည်ပြုသည်။
inပြီလတွင်စျေးကွက်သို့ကျရောက်မည့် Reno အကွာအဝေးအတွင်းဥရောပ၌မှတ်ပုံတင်ထားသည့် OPPO စမတ်ဖုန်းငါးလုံးမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
Vivo X27 နှင့် X27 Pro ကိုတရားဝင်တင်ဆက်ခဲ့သည်
တရားဝင်တင်ဆက်ထားပြီးဖြစ်သောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အလယ်အလတ်တန်းစားမော်ဒယ်သစ်များဖြစ်သော Vivo X27 နှင့် Vivo X27 Pro အကြောင်းအားလုံးလေ့လာပါ။
OPPO AX5s - ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အသစ်စက်စက်အမျိုးအစား
OPPO AX5s, တရုတ်ပြည်တွင်တရားဝင်ပြသခဲ့ပြီးဖြစ်သောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှနိမ့်နိမ့်ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
OPPO F11: F11 Pro ၏ mini version
အိန္ဒိယတွင်ပြုလုပ်သောပွဲတစ်ခုတွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုဖော်ပြပြီးပြီဖြစ်ရာမကြာမီစတိုးဆိုင်များသို့ရောက်သွားတော့မည်ဖြစ်သော OPPO F11 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
OPPO F11 Pro ကိုတရားဝင်တင်ဆက်ခဲ့သည်
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် OPPO F11 Pro ၏တင်ဆက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါကဖုန်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အပြည့်အစုံကိုသိရှိထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
မနက်ဖြန်မှ စ၍ သင်သည် Oukitel C13 Pro ကိုကြိုတင်စာရင်းသွင်းနိုင်သည်
ကျွန်တော်တို့ဟာအနိမ့်ဆုံးအိတ်ကပ်တွေအတွက်စမတ်ဖုန်းဖြစ်တဲ့ Oukitel ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံလွှတ်တင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာကြာပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့ပြောနေတာ ...
Vivo V15: ဒီအလယ်အလတ်တန်းစားအတွက်ပြန်လည်ဆွဲယူနိုင်သောကင်မရာနှင့်နောက်သုံးဆနောက်ကင်မရာ
ဆုတ်ခွာနိုင်သောရှေ့ကင်မရာနှင့်နောက်ကင်မရာသုံးခုပါသည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်အသစ် Vivo V15 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။
Vivo IQOO: IQOO ၏ပထမဆုံးဖုန်းသည်တရားဝင်ဖြစ်သည်
တရား ၀ င်တင်သွင်းထားပြီးဖြစ်သောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်၏ပထမဆုံးဖုန်း Vivo IQOO ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလေ့လာပါ။
မျှော်လင့်ထားသည့် Pocophone နှင့် HD ၀ န်ဆောင်မှု streaming video service များသည် OTA မှတစ်ဆင့် update တစ်ခုပုံစံရောက်ရှိလာတော့မည်။
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏စမတ်ဖုန်းကိုအသစ်ပြန်လည်ပြုလုပ်ရန်စီစဉ်နေပြီးကြမ်းတမ်းသောမော်ဒယ်ကိုရှာဖွေနေပါက TomTop မှကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောကမ်းလှမ်းမှုသည်သင့်ကိုစိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်။
Oukitel C15 Pro သည် Android9Pie နှင့် 5G နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်နေသည်
Oukitel ကုမ္ပဏီနှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ဆုံးပေါ်ကောလာဟလများအရ C15 Pro သည် Android9Pie ဖြင့်ဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်လိမ့်မည်ဟုဆိုကြသည်
UMIDIGI S3 PRO: Raffle ဖြင့်သင်ယူသုံးနိုင်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အထင်ကရအသစ်
Indiegogo တွင်သင် ၀ ယ်ယူနိုင်သောဝဘ်ပေါ်မှအခမဲ့ပေးသောအမှတ်တံဆိပ်၏အမှတ်တံဆိပ် UMIDIGI S3 Pro အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Vivo V15 Pro - ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သောကင်မရာဖြင့်စမတ်ဖုန်းအသစ်
ဆုတ်ခွာနိုင်သောကင်မရာရှိပြီးတင်ပြပြီးသောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်အသစ် Vivo V15 Pro အကြောင်းအရာအားလုံးကိုရှာဖွေပါ။
တရား ၀ င်တင်ဆက်ခဲ့သောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှစတင်အဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်း Vivo U1 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပိုမိုလေ့လာပါ။
OUKITEL C13 Pro - အမှတ်တံဆိပ်၏စမတ်ဖုန်းအသစ်
မတ်လစတိုးဆိုင်များတွင်တရားဝင်ဖြန့်ချိမည့်အမှတ်တံဆိပ်၏စမတ်ဖုန်းအသစ်ဖြစ်သော OUKITEL C13 Pro အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
တရား ၀ င်တင်ဆက်ထားပြီးဖြစ်သည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှရေကျသောထုထည်ရှိသောစမတ်ဖုန်းအသစ် OUKITEL C15 Pro အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Vivo သည် IQOO ကို၎င်း၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်
Vivo တီထွင်ခဲ့သော IQOO အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ၊ Android တွင်စမတ်ဖုန်းဂိမ်း၏အစိတ်အပိုင်းကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မည်။
Nubia သည်လည်း MWC 2019 တွင်ခေါက်နိုင်သောကိရိယာတစ်ခုကိုလည်းတင်ပြလိမ့်မည်
Nubia ၏တင်ဆက်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာလိုပါက MWC 2019 တွင်ခေါက်ထားသောပစ္စည်းကိုတရားဝင်တင်ပြမည်။
Uniding Umidigi One Max ။ € 6.3 ထက်နည်းသော ၆.၃ လက်မမျက်နှာပြင်အားလုံး !!
ငါသည်သင်တို့ကို uns လုပ်ခြင်း & ပထမ ဦး ဆုံးဆွဲဆောင်မှုယူဆောင်ရသောဗီဒီယို, နှစ်ကောင်အောက်မှာလှပသော Android Mid-range ကို Umidigi One Max ၏။
Vivo APEX 2019 - ခလုတ်များ၊ ဆိပ်ကမ်းများနှင့် slot မပါဘဲဖုန်းအသစ်
အမှတ်တံဆိပ်၏စမတ်ဖုန်းအသစ်ဖြစ်သော Vivo APEX 2019၊ ခလုတ်များ (သို့) slot များမရှိသည့်စမတ်ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။ ၎င်း၏သတ်မှတ်ချက်များကိုယခုသိပြီ။
သင်၏စမတ်ဖုန်းကိုအသစ်ပြန်လည်လုပ်ရန်စဉ်းစားနေပါသလား။ ဤ TomTop ကမ်းလှမ်းချက်များ၏အားသာချက်ကိုယူပါ
TomTop မှယောက်ျားများသည်ငါတို့လိုင်စင်ကိုကျွန်ုပ်တို့လွဲချော်။ မနိုင်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ကိုသက်တမ်းတိုးရန်ကမ်းလှမ်းချက်များစွာပေးခဲ့သည်။
Android နှင့်အတူပထမဆုံး Redmi သည်ပိုမိုနီးကပ်စွာနီးကပ်လာသည်
ပေါက်ကြားမှုများအရမကြာမီတွင်စတင်မိတ်ဆက်မည့် Android Go ရှိသည့် Redmi Go ၏ပထမဆုံးဖုန်းဖြစ်သော Redmi Go အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Vivo Y89: အမှတ်တံဆိပ်၏အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်သည်ယခုတရားဝင်ဖြစ်သည်
တရားဝင်ထုတ်လုပ်ထားပြီးဖြစ်သောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ Vivo Y89 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်ထုတ်လွှတ်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
OUKITEL WP2 ကိုအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်သင်ယခုယူနိုင်ပါပြီ
ဤပရိုမိုးရှင်းအတွက်ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်အထိရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်သင်ယူနိူင်သော OUKITEL WP2 အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ဤကမ်းလှမ်းချက်၏အားသာချက်ကိုယူပြီး Oukitel U23 ကိုယူရို ၁၈၀ ဖြင့်သာဝယ်ပါ
Xiaomi မှ Mi Box4နှင့် 4c ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်သာရရှိနိုင်ကြောင်းတရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်
ဒီနေ့မှာ Xiaomi က Smart TV Box အသစ်နှစ်မျိုးကိုကြေညာလိုက်ပြီ၊ Mi Box4နဲ့ 4c ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုမင်းတို့ပြောပြပါမယ်
Oppo F5 သည် Samsung သို့မဟုတ် Apple လိုဂိုများဖြင့်အဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်းများမလိုဘဲအံ့အားသင့်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။
OUKITEL MIX2သည်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူမှအသစ်ဖြစ်သည်
OUKITEL MIX2နှင့်ထိပ်ဆုံးနေရာတွင်ရှိသည့်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူလောင်းကစားနှင့်တွေ့ဆုံပါ
Huawei Mate 10 Lite ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင် Huawei Maimang6ဟုအမည်ပေးထားပြီးဖြစ်နိုင်သည်
ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော Huawei Mate 10 Lite သည်တရုတ်ပြည်တွင် Huawei Maimang6အမည်ဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ပထမဆုံးအနေဖြင့်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနိုင်ငံများသို့မထွက်ခွာမီတွင်ပြသခဲ့သည်။
Xiaomi Mi Mix2၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်အွန်လိုင်းတွင်ရှိပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်၏အကောင်းဆုံးတရုတ်ဖုန်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်
Xiaomi Mi Mix2၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအွန်လိုင်းတွင်ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်၏အကောင်းဆုံးတရုတ်ဖုန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံးတရုတ်စမတ်နာရီများကိုအရည်အသွေး / စျေးနှုန်းအချိုးအစားဖြင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်သောကြောင့်ငွေကြေးအနည်းငယ်သုံးစွဲခြင်းဖြင့်အပြည့်စုံဆုံးနာရီကို ၀ ယ်နိုင်သည်။ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ တွင်အပ်ဒိတ်လုပ်ခဲ့သည်
တရုတ်ကုမ္ပဏီ Comio သည်စမတ်ဖုန်းအသစ်သုံးမျိုးနှင့်သီးသန့်အော့ဖ်လိုင်းမော်ဒယ်လ်များစတင်ခြင်းဖြင့်အိန္ဒိယဈေးကွက်ကိုအနိုင်ယူရန်စတင်ခဲ့သည်
ယခုအချိန်တွင်အကောင်းဆုံးတရုတ်တက်ဘလက်များမည်သည့်အရာကိုရှာပါ။ သင်ကောင်းကောင်း၊ လှပ။ စျေးသက်သက်သာသာရှိသောတက်ဘလက်ကိုသင်ရှာဖွေနေပါက ၂၀၂၁ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင်အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသောစာရင်းကိုလက်မလွတ်ပါနှင့်
ယူရို ၁၀၀ မပြည့်သောအကောင်းဆုံးတရုတ်ဖုန်း
သင်အကောင်းဆုံးသောငွေဖြင့်ဝယ်နိုင်သည့်ယူရို ၁၀၀ ထက်နည်းသောအကောင်းဆုံးတရုတ်ဖုန်းများကိုရွေးချယ်ပါ။ အဆင့်မြှင့်တင်ထားသောစာရင်း!
Oppo R11 ကိုတရုတ်တွင်တရားဝင်ကြေငြာ
တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ Oppo သည်အရည်အသွေးကောင်း၊ ကင်မရာနှစ်မျိုးနှင့်စျေးနှုန်းချိုသာသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စမတ်ဖုန်းဖြစ်သော Oppo R11 ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်။
Samsung သည် Pirates of the Caribbean ရုပ်ရှင်အသစ်မှဘဏ္inspiredာရေးရင်ဘတ်တွင်တင်သွင်းထားသောအထူး Galaxy S8 ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
အရည်အသွေးမြင့်ပြီးစိတ်ချရသောတရုတ်မိုဘိုင်း (၅) ခု
ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးပေါ။ အရည်အသွေးကောင်းသည့်တရုတ်စမတ်ဖုန်းငါးခုကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ အချို့သောအရည်အသွေးမြင့်ဒီဇိုင်းများနှင့်ဒီဇိုင်းနှင့်အခြားသူများသည်အလယ်အလတ်တန်းစားအဆင့်တွင်ရှိသည်။
နောက်ဆုံး Gartner အစီရင်ခံစာသည်ယခင် IDC လုပ်ငန်းမှအချက်အလက်များကိုအတည်ပြုသည်။ Samsung နှင့် Apple Cede Market Share သည်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူများထံမှဖြစ်သည်
knockdown စျေးနှုန်းများမှာအသစ်က Mid-range ကို Honor 6A
Honor သည်တရုတ်ပြည်တွင် Honor 6A ကိုစျေးကွက်ထဲတွင်ယူရို ၁၅၀ ထက်မပိုသောအလယ်အလတ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုပြသခဲ့သည်
Huawei သည် Oppo မှထိပ်ဆုံးနေရာကိုရယူပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်ပထမသုံးလပတ်အတွင်းအကြီးဆုံးစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူတံဆိပ်ဖြစ်လာသည်
Xiaomi Mi Electric ဆိုင်ကယ်သည်တရုတ်ကုမ္ပဏီမှအသစ်ဖြစ်သည်
လျှပ်စစ် "စမတ်" ဆိုင်ကယ်သည်တရုတ်ကုမ္ပဏီ Xiaomi ၏ထုတ်ကုန်အသစ်ဖြစ်ပြီး Mi electric scooter ကိုဒေါ်လာ ၂၈၉ ဒေါ်လာဖြင့်သာခေါ်ဆိုခဲ့သည်။
အချို့သော Android စမတ်ဖုန်းများသည်တရုတ်နိုင်ငံသို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်ပေးပို့ခြင်း
သန်း ၇၀၀ ကျော်သောကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့် Android စမတ်ဖုန်းများသည်သုံးစွဲသူအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းပြီး၎င်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရှိဆာဗာများသို့ပေးပို့သည့် software များရှိသည်
Moto M သည်ယခုအခါတရုတ်နိုင်ငံတွင်တရားဝင် ၀ င်သည်။ ၃၀၅၀mAh ဘက်ထရီနှင့်သတ္တုကိုယ်ထည်ဖြစ်သည်
Motorola Moto M သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်တရားဝင်ဖုန်းဖြစ်ပြီး၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ပြောင်းလဲရန်အတွက်ဒေါ်လာ ၂၉၅ သတ်မှတ်ထားသည်။
Xiaomi သည် Mi Note 2s အားလုံးကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်စက္ကန့် ၅၀ အတွင်းရောင်းချသည်
စက္ကန့်ငါးဆယ်မျှအကြာတွင် Xiaomi သည်လွန်ခဲ့သောနာရီအနည်းငယ်ကစတင်ခဲ့သောထို Flash ရောင်းချမှုတွင်၎င်း၏ Mi Note 50 အားလုံးကိုရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။
Vivo X7 နှင့် Vivo X7 Plus တို့ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင် Snapdragon 652 chip နှင့် 16MP Camera တပ်ဆင်ထားသည်
Vivo X7 နှင့် Vivo X7 Plus တို့ကိုအကောင်းဆုံး selfies ရိုက်ကူးရန် Snapdragon 652 chip နှင့် 16MP ရှေ့ကင်မရာဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
Aprilပြီလတွင် Xiaomi သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရေးအပါဆုံးဖြစ်သောတရုတ်တစ် ဦး ၏ဈေးကွက်ဝေစု၏ ၂၆ ရာခိုင်နှုန်းကိုရရှိခဲ့သည်။
ဤသည် Vivo X6SPlus ဖြစ်ပါတယ်
Vivo မှထိပ်တန်းအဆင့်မြင့် terminal အသစ်တစ်ခုပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ဤသည် Vivo X6SPlus ဖြစ်ပါတယ်။
Elephone Ele Watch နှင့်တရုတ်နာရီတို့က Android Wear ဖြင့် ၁၁၅ ဒေါ်လာဖြင့်ဝယ်သည်
Elephone Ele Watch သည် Android Wear နှင့်အတူပထမဆုံးစျေးပေါသောစမတ်နာရီဖြစ်သည်။
Elephone သည်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုတွင်၎င်းသည်၎င်း၏ Elephone Vowney terminal၊ ၎င်း၏အင်အားအကောင်းဆုံး terminal ကိုတင်ပြသည်။
Android Wear နှင့်အတူပထမဆုံးတရုတ်စမတ်နာရီဖြစ်သည့် Elephone တွင်၎င်းလက်၌ရှိသည်။ Elephone Ele Watch သည်ပေါက်ကြားခဲ့ပြီး၎င်းသည်မည်ကဲ့သို့ကြည့်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်နိုင်သည်။
Xiaomi ကိုထိုင်နိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်မှမရှိဘူး။ တရုတ်ထုတ်လုပ်သူသည်တရုတ်ပြည်တွင်အရောင်းရဆုံးဘုရင်ဖြစ်နေဆဲပင်။
Lenovo A3900 သည်တရုတ်ကုမ္မဏီမှကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်
တရုတ်ကုမ္ပဏီတွင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်စျေးနှုန်းများပါ ၀ င်သောစျေးပေါသော terminal, Lenovo A3900, စျေးသိပ်မကြီးသောမိုဘိုင်းဖုန်းတစ်ခုရှိသည်။
UleFone Be Touch သည် iPhone6နှင့်ဆင်တူသည့်တရုတ် terminal တစ်ခုဖြစ်သည်
Xiaomi Mi4 ကိုရရှိနိုင်ပါပြီ
Xiaomi Mi4 သည်ယခုအချိန်တွင်စိတ် ၀ င်စားစရာအကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မကြာမီငါတို့နှင့်အလွန်နီးကပ်လာလိမ့်မည်
တရုတ် Android ဖုန်းများသည် Google Play စတိုး၏ဗားရှင်းအတုနှင့် Spyware ကူးစက်ခံထားရသော G-data အရသိရသည်။
အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များစွာရှိသည့်မေးခွန်းတစ်ခုမှာတရုတ်မိုဘိုင်းကို ၀ ယ်ရန်ထိုက်တန်သလား။ အဖြေမှာဟုတ်သည်